Zyro- ဤစျေးနှုန်းသက်သာသောပလပ်ဖောင်း | ဖြင့် သင့်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းစတိုးကို အလွယ်တကူတည်ဆောက်ပါ။ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 11, 2021 ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 11, 2021 Douglas Karr
တတ်နိုင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပလပ်ဖောင်းများ ရရှိနိုင်မှုသည် ဆက်လက်အထင်ကြီးနေပြီး အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ (CMS) မတူပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ပိုင်၊ open-source နှင့် အခပေး CMS ပလပ်ဖောင်းများစွာတွင် နှစ်အတော်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်… အချို့က မယုံနိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲပြီး အချို့မှာ အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဖောက်သည်များ၏ ရည်မှန်းချက်များ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ မည်သည်ကို ကျွန်ုပ် မလေ့လာမချင်း၊ မည်သည့်ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုချက် မထုတ်ပြန်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတွင် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကို ချရန်မတတ်နိုင်သော အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက၊ သင်သည် coding မလိုအပ်သည့် ရိုးရှင်းသောပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံပလိတ်များ ရွေးချယ်မှုများစွာရှိသည်။
ထူထောင်လိုက်တော့ spa site လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်က၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်လိုအပ်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု သိထားသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပိုင်ရှင်သည် ထိုကြိုးပမ်းမှုအဆင့်အတွက် ပေးချေရန် မတတ်နိုင်သောကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အပ်ဒိတ်များနှင့် ဆက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ရန် နည်းလမ်းမရှိတော့ပါ။
Zyro- ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အွန်လိုင်းစတိုး သို့မဟုတ် အစုစုကို တည်ဆောက်ပါ။
မယုံနိုင်လောက်အောင် တတ်နိုင်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုပါ။ ဇီရို. Zyro တွင် အလုံးစုံပါဝင်သောစျေးနှုန်းများနှင့် အန္တရာယ်မရှိ၊ ရက် 30 ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံချက်ရှိသည်။ အစီအစဉ်တိုင်းဖြင့် သင်သည် 24/7 တိုက်ရိုက်ချက်တင် ပံ့ပိုးမှုကိုပင် ရရှိနိုင်သည်။
hosting - hosting provider ကိုသွားရန်မလိုအပ်ပါ၊ Zyro ၏ပလပ်ဖောင်းသည်အားလုံးပါဝင်ပါသည်။ အချို့သော ပက်ကေ့ခ်ျများဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သင့်ဒိုမိန်းကို အခမဲ့ရယူနိုင်သည်။
တင်းပလိတ်များ - Zyro ပုံစံများအားလုံးသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ဗလာပုံစံပုံစံများဖြင့် စတင်ပါ သို့မဟုတ် စတိုးနမူနာများ၊ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု နမူနာများ၊ ဓာတ်ပုံ နမူနာပုံစံများ၊ စားသောက်ဆိုင် နမူနာများ၊ အစုစု နမူနာများ၊ ပြန်လည်စတင်သည့် ပုံစံများ၊ ဖြစ်ရပ် နမူနာပုံစံများ၊ ဆင်းသက်သည့် စာမျက်နှာ နမူနာများ သို့မဟုတ် ဘလော့ဂ် နမူနာများမှ ရွေးချယ်ပါ။
Drag-and-Drop တည်းဖြတ်သူ - ကုဒ်မလိုအပ်ပါ၊ သင့်တွင် သင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ဒီဇိုင်နာပြုလုပ်ထားသော နမူနာများဖြင့် ဖန်တီးမှုအပြည့်အ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Search Engine Optimization - Zyro ၏ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုပလပ်ဖောင်းတွင်အင်္ဂါရပ်အားလုံးရှိသည်။ သင့်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက် စတိုးဆိုင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
AI စာရေးဆရာ - စာရေးဆရာကြီး မဟုတ်ဘူးလား? စာရေးဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလား။ AI Writer ကို သင်တည်ဆောက်နေစဉ်တွင် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် စာသားကို ဖန်တီးခွင့်ပြုပါ။
အီးကုန်သွယ်ရေး - ငွေပေးချေမှုလုပ်ဆောင်မှု၊ ပို့ဆောင်မှုပေါင်းစည်းမှု၊ ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာအပါအဝင် ပြီးပြည့်စုံသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခု (CRM) အလိုအလျောက် အီးမေးလ်များနှင့် အစီရင်ခံခြင်း။ သင့်စတိုးကို Amazon၊ Facebook နှင့် Instagram တို့တွင် အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
လုံခွုံရေး - သင့် SSL လက်မှတ်နှင့် HTTPS ကုဒ်ဝှက်စနစ်ဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်များကို အပြည့်အဝ လုံခြုံစေပြီး ecommerce အရောင်းအ၀ယ်များကိုလည်း အကာအကွယ်ပေးထားသည်။
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အစီရင်ခံခြင်း။ - Google Analytics၊ Kliken နှင့် MoneyData ကဲ့သို့သော ကိရိယာများဖြင့် သင်၏ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများသည် ဘယ်ကလာသည်ကို ရှာဖွေပါ။
Zyro တွင် လျှို့ဝှက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ တတ်နိုင်သောအစီအစဉ်များစွာရှိသည်။
Zyro တွင် နိုဝင်ဘာလ 15 ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့အထိ အသုံးပြုမည့် Black Friday ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုရှိပြီး… ကုဒ်ကို အသုံးပြုပါ။ ZYROBF 86% အထိ ချွေတာလိုက်ပါ။
Zyro ကို အခမဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါကတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်၏ ဇီရို ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ငါ့ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည်။
Tags: amazon စတိုးCMSအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါဒိုမိန်းဆွဲယူ တည်းဖြတ်သူအီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းအီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုပိုကောင်းအောင်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းfcommerceinstagram ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစာရင်းစာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအွန်လိုင်းစတိုးအွန်လိုင်းစတိုးတည်ဆောက်သူအွန်လိုင်းစတိုးပလက်ဖောင်းအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်သူoptimizationအစုစုကို siteseoရေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလူမှုရေး commerce ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တင်းပလိတ်များဇီရို